News - Waa maxay codsiyada kala duwan ee qalabka kala duwan ee Tilmaamaha Tilmaamaha Aluminium Aluminium？
Maxay yihiin codsiyada kala duwan ee qalabka kala duwan ee Tilmaamaha Tilmaamaha Aluminium Aluminium？
Shaqada aasaasiga ah ee looxyada aluminium ee qaabaysan ayaa ah in laga hortago siibashada. Xaaladaheena guud ee lagu isticmaalo arimaheena waa basaska, wiishashka, wiishashka, iwm. Deegaanadan, shuruudaha waxqabadka ee aluminium aluminium ma badna, 1060 aluminium aluminium ah ayaa buuxin kara shuruudaha waxqabadka. Marka waa maxay farqiga u dhexeeya waxqabadka kala duwan iyo isticmaalka qalabka aluminium ee qaabaysan? Taxanaha soosocda waa taxane yar oo aan kuusoo bandhigo.
Qalabka qaboojiyaha sidoo kale wuxuu u baahan yahay ka hortagga taraafikada, deegaannadan, waxqabadka ka hortagga miridhku waa tilmaame muhiim ah, waxqabadka aluminium 1060 wuxuu awoodi kari waayey qaboojinta waxqabadka ka hortagga taraafikada, 3003 aluminium aluminium ah oo ah saxan aluminium ka hortag ah oo ka hortagga ah, waa kahortagga mashruuca barafka leh ee deegaanka qoyan. Marka lagu daro 3003 aluminium aluminium, 3A21 saxan aluminium ayaa sidoo kale aad u badan, dhammaantood waxay ka tirsan yihiin saddexda taxane ee aluminium aluminium aluminium.
5052 Saxan aluminium ah oo la jeexjeexay ayaa badanaa loo isticmaalaa deegaanka badda.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka 5 taxane saxan aluminium ayaa ah inay si wax ku ool ah uga hortagi karto daxalka aashitada iyo bey'adda alkali, sidaas darteed nooca aluminium ee 5052 waa sheyga ugu weyn ee ka hortagga taraatikada ee deegaanka badda. Dabcan, taxanaha 5 aluminium ee taxanaha ah, waxaa sidoo kale jira noocyo sida 5083, 5754, iwm, kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu soo saaro saxan aluminium qaabeysan.
Maxay yihiin isticmaalka alwaaxda qaabaysan ee aluminium ah? Waxaa sidoo kale jira xaalad codsi ah, sida mashiinka shaqada hawada, heerkulka sare ee ka hortagga taraafikada, aashitada sare iyo bey'adda alkali ee alkali, sababo nabadgelyo awgood, waxqabadka saxanka aluminiumku aad ayuu u sarreeyaa, 6061 saxan aluminium qaabeysan ayaa dhashay. 6061 saxan aluminium dhammaan dhinacyada waxqabadka waa kuwo aad u wanaagsan, waxay ku siin karaan difaac adag jawiga khatarta sare leh ee ka hortagga taraatikada.
Waxyaabaha kor ku xusan waa codsiyada kala duwan ee qalabka kala duwan ee saxanka aluminiumka qurxinta ee Ketchum kuu soo bandhigo. Horumarka joogtada ah ee teknoolojiyada dhalaalka aluminium iyo isbeddelka habka wax soo saarka, noocyada iyo alaabada saxanka aluminium ee qaabaysan ayaa aad iyo aad u badan, waxayna door muhiim ah ka ciyaari doonaan warshado badan.
qiimaha aluminium jeeg jeeg, Waraaqaha Aluminium ee jaban, 7050 sheet aluminium, Alaab-qeybiyeyaasha Birta ah ee Anodized Aluminium, daawaha aluminium 6061 qiimaha, Tread Tread Aluminum Aluminium,